China iwayini cooler isikhwama ifektri abakhiqizi | UHuanyi
PORTABLE & CONVENIENT - Lo mkhono opholile wewayini ulula, uhlangene futhi uyasebenziseka. Mane uye nayo epikinikini, ngasolwandle, ekhempini, noma kunoma imiphi imicimbi ukuze ujabulele futhi uphumule ngeziphuzo ezibandayo ngaphandle kwebhakede leqhwa.
KULULA UKUSETSHENZISWA – Faka isilaza samabhodlela e-champagne efrijini cishe amahora amabili, bese ushelela emkhonweni ukuze uphole iziphuzo ngokushesha futhi uzigcine zipholile ngokuphelele amahora. Ilungele ukusetshenziswa ewayinini, kubhiya, eChampagne, njll. Usayizi womkhiqizo: 6.1 x 9.25 Inch
Igama: Isikhwama sewayini esipholile, ibhodlela likabhiya elipholile
Izinto: Izinto ezingaphandle zifaka ku-PVC, Inayiloni + PVC; okokusebenza kwangaphakathi kufaka phakathi i-CMC + Glycerin + Preservative + Water purified
Isisindo: Kwenziwe ngentando, ngokuvamile 400g
Umbala: Kwenziwe ngentando, sithengisa okuluhlaza okwesibhakabhaka, okumnyama, okuluhlaza, okubomvu, nsundu
Usayizi: Kwenziwe ngentando, imodeli ehlukene esitokweni sokukhetha
Ilogo: Ngokwezifiso, logo silkscreen noma ilebula lokuthunga
Isici: Iyasebenza futhi; I-Eco-friendly, Non-toxic, Non-caustic
Isampula: Izinsuku eziyi-7 noma ngaphezulu ngemuva kokuqinisekiswa; imikhiqizo yokusungula: izinsuku ezingu-1-3
Imodi yentengo: I-Ex Works, i-FOB, i-CFR, i-CIF, i-CIP
Isikhathi sokukhokha: Ama-30% kusengaphambili; ama-70% ngaphambi kokulethwa noma ekwethulweni kwekhophi B / L; T / T, PayPal, inyunyana yaseNtshonalanga, L / C ,, nenye indlela yokukhokha
Isitifiketi: SGS, CE, FDA njll
Langaphambilini Imaski yeso leGel
Olandelayo: inja yokupholisa umata
Okupholile kwebhodlela likabhiya